सुस्मा र पूर्व युवारज पारसको कहाँ भयो भेट ? – Sidha Post 24
पछिल्लो समय चलचित्र अभियनबाट टाढा रहेकी अभिनेत्री सुस्मा कार्की सामाजिक सञ्जालमार्फत बेला–बेला चर्चामा आइरहेकी हुन्छिन् ।
केहि समय पहिला नाइटोमा फुली लगाएको भिडियो शेयर गरेर चर्चामा थिइन् । अझै केहि पहिला उनले सलमान खानसँगको फोटो शेयर गरेर पनि चर्चामा रहेकी थिइन् ।
पारससँगको फोटो शेयर गर्दै कार्कीले फेसबूकमा लेखेकी छन्, हरेक दिन मैले भगवानबाट आशिष पाइरहेकी छु । र, म यसलाई एक नयाँ शुरुवात मान्दछु । हो ! सबैचिज सुन्दर छ । आदरणीय युवराजसँग ।
एक समय अभिनेता पल शाहको जोडी अभिनेत्री आँचल शर्मासँग दर्शकहरुले निकै रुचाएका थिए । आँचल विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि भने उनीहरुको सहकार्य भएको छैन। अहिले उनीहरुबीच राम्रो सम्बन्ध नरहेको बताइन्छ । आँचलपछि भने पलको जोडी अरु मोडलहरुसँग उतिधेरै रुचाइएको थिएन ।
तर, यतिबेला पलको जोडी अभिनेत्री मलिका महतसँग दर्शकहरुले मन पराएका छन् । लकडाउनको समयमा सार्वजनिक भएको ‘फुलबुट्टे सारी’ गीतमा उनीहरुले पहिलो पटक काम गरेका थिए । यो गीतलाई यूट्युबमा अहिलेसम्म तीन करोडभन्दा बढी पटक हेरिसकिएको छ । यसपछि ‘टाढा भए पनि’ बोलको गीतमा अभिनय गरे, जुन अहिले चर्चाको शिखरमा छ ।
म्यूजिक भिडियोमा सर्वाधिक रुचाइएको यो जोडीलाई अब फिल्ममा पनि हेर्न पाइने भएको छ । पल र मलिकाको जोडी बाँधेर ‘फुलबुट्टे साडी र टाढा भए पनि’ गरी दुईवटा म्यूजिक भिडियो बनाएको केन्द्र मोशन पिक्चरस्ले उनीहरुलाई लिएर फिल्म निर्माण गर्न लागेको हो ।
यतिबेला चलचित्रको धमाधम कथा लेख्ने काम भैरहेको छ। पोखरामा रहेर माओत्से गुरुङ र उनको टिमले चलचित्रको कथा लेखिरहेको छ । यसै बिषयमा केन्द्र मोसन पिक्चर्सले बनाउन लागेको चलचित्रको कथा सुन्ने र मन परेको खण्डमा काम गर्ने पलले बताएका छन् । यदि, कथा मन परेन भने फेरि नयाँ कथामा केन्द्र मोसनबाटै काम गर्ने तयारी रहेको पलले बताए ।
पल भन्छन्–‘दर्शकले हाम्रो जोडीलाई मन पराउनुभएको छ । यसैले, हामीलाई लिएर भिडियो र चलचित्र बनाउने सोच अरु केही टिमको पनि छ । तर, हामी सुरुवातमा केन्द्र मोसनकै चलचित्रमा काम गर्ने तयारीमा छौं ।’
म’हिला’हरू को विहे*पछि हिप ठूलो हुनु’को कारण यस्तो छ…..